Deni oo diiday inuu fuliyo goaankii kadhanka ahaa ee Somaliland ee kasoo baxay baarlamaanka Garoowe. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDeni oo diiday inuu fuliyo goaankii kadhanka ahaa ee Somaliland ee kasoo baxay baarlamaanka Garoowe.
July 28, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 3
Mid ka mid ah daadiidka konteenarada ka soo qaada Berbera Badeecooyin badan oo ka yimaada China, Turkey iyo meelo kale ayaa hadda si toos ah u yimaada dekedda Berbera, kuwaas oo gaadiid ku soo daabulo Puntland, halka markii hore lagu soo furfuri jiray Dubai iyo Salaalah, kadibna doonyo loogu soo qaadi jiray Puntland.
Macaamilka ganacsi ee Somaliland iyo Puntland ayaa imanaya, iyadoo labada maamulka ay ku muransan yihiin gobolada Sool, Sanaag iyo Ceyn oo dhowr jeer dagaallo dhiig ku daatay ku dhexmaray labada dhinac
Horaan usheegay deni inuu kashaqaynayo horumarka puntland.
oon dheg jalaq usiinayn kuwa colada iyo xasarada ladhex fadhiya garowe.
Mida kale ilaa iminka wuxu latacalaya dayntii uu kaga tagay ina gaas.
Gnacsigu waa xor cidna ma hor joogsan karto… Baarlamaanka, Binti Girl, beeen bay isku akhriyeen.
Mubaarik iyo xaarre Saalax kkkk kkkk kkk kkk kkkk waa labo khasiis oo iska saaran daabad sarkhaan korkeeda aysan ogayn halkay u siddo kkkk kkk waxay isku hooriyaan sheeko la yiraa huuhaa oo inta badan caan Ka ah degaannada maamul beeleedka iduur lagu garto dadka dhimir xauunka qaba iyo mukhaadaraadka dilooday ee ka dhacay nolosha, inta badan fara taag taag iyo muran baa caado ah. Gaw, Naw, Dee iyo Jaw baa ku dhamaada warkoodu kkkk kk .